Top 10 Meghan Trainer Iingoma njengoMculi kunye neNgoma
10. I-Meghan Trainer - "Ndiye" (2016)
I-Meghan Trainer - "Ndiye". Epic efanelekileyo
"Me Too" ngowesibini engatshatanga kwi-studio ye-studio ye-studio ye-Meghan Trainor. Ingoma ibhaliwe ngokubhaliweyo nguMeghan Trainor kunye noJason Derulo phakathi kwabanye. Ukurekhoda kwaveliswa nguRicky Reed owancedisa ukuhlanganisa iJason Derulo kunye neentlanu eziphambili ze-pop zitshitshitshitshitshitshi "Zithetha eziMdaka" kunye ne "Wiggle."
9. I-Meghan Trainer - "Mzalwana Oza Kuzayo" (2015)
I-Meghan Trainer- "Mzalwana Oza Kuzayo". Epic efanelekileyo
Ingoma ye-doo-op ethi "Dear Husband Husband" yabhalwa ngokubhaliweyo kwaye iveliswa nguKevin Kadish, umdibaniselwano waseMeghan Trainor ngenxa enkulu ye-albhamu yakhe yokuqala yesihloko . Kwagxeka ngabanye ababukeleyo ukubeka phambili umbono wokudala umtshato, kodwa abanye babancoma ngokuhlaselwa kwenkcubeko yokuloba. "Dear Husband's Future" wakhululwa njengomntu wesithathu ongatshatanga kwi-albhamu yeSihloko kunye ne-# 14. Ekugqibeleni kuthengisa iikopi ezingaphezu kwezigidi ezimbini e-US.
8. UJennifer Lopez - "Akayena umama wakho" (2016)
UJennifer Lopez - "Akayena umama wakho". Epic efanelekileyo
"Ngaba umama wakho" ungowokuqala u- Jennifer Lopez emva kokuba abuyele kwii-Epic Records aze agqibe isigwebo sakhe njengejaji kwi- American Idol . Ingoma ibhaliwe nguMeghan Trainer kunye nommangali uDimmoney Lewis, uDkt. Luke, umdibaniselwano ohlala rhoqo kwi-Cirkut, kunye no-Thomas City sika Thomas Thomas. I-Meghan Trainer inikezela ngegama lokugcinwa kwamagama kwi-rekodi.
Ukuphendula izikhalazo ngabafundi baseKesha malunga nentsebenziswano kaMeghan Trainor noDkt Luke , uMeghan Trainor ubonise ukuba "Ngaba uMama wakho akabhalwa ngo-2014 ngaphambi kokulwa kwezomthetho phakathi kukaKesha noDkt Luke. Ingoma ekuqaleni yayijoliswe kwi-albhamu yokuqala ye-Meghan Trainor, kodwa yagqiba ukuyiyeka. Abagxeki baye badumisa le ngoma njengomculo wesifazane ozimeleyo.
7. UCharlie Puth - "uMarvin Gaye" ophethe iMeghan Trainor (2015)
UCharlie Puth - "uMarvin Gaye" obandakanya iMeghan Trainer. IAlantic
"UMarvin Gaye" waqala ukukhululwa ngoFebhuwari 2015 njengowokuqala omnye kumculi-wengoma yomculo uCharlie Puth. Akuzange kubhaliwe ngu-Meghan Trainor, kodwa ibonakala njengomlingane onamazwi. Ekukhululweni kwakhe kokuqala, le ngoma yahluleka ukuba nefuthe eliphawulekayo letshati e-US, kodwa yaba yinto ephezulu e-Australia. Ukulandela ukubonakala kukaCharlie Puth kwi # 1 ukukhangela "Uyabona kwakhona" entwasahlobo ka-2015, "uMarvin Gaye" waphinde wakhululwa waza wenyuka waya ku-# 15 kwi-radio yangaphakathi. UCharlie Puth no-Meghan Trainer benza "uMarvin Gaye" bahlala kwiiMbali zoMculo zaseMelika ze-2015 kwaye baphela ngokubanga nje ngevidiyo yomculo. Bobabini banqabile nayiphi na inxaxheba yobomi benene.
6. I-Rascal Flatts - "Ndiyathanda Isandi Saloo" (2014)
Rascal Flatts - "Ndiyathanda Isandi Saloo". I-Big Machine enobubele
I-Meghan I-Co-ordinator-yabhala "Ndiyathanda Isandi Salo" kunye nomculi wengoma yelizwe elidala uJesse Frasure kunye noShay Mooney welizwe likaDan + Shay. Ingoma yayifakwe kwi-albhamu I-Rewind ngelizwe elinesithathu lamaRascal Flatts. "Ndiyathanda Isandi Saloo" sithole indumiso ngokukhumbuza abaphulaphuli beentsuku zikaRascal Flatts ezinkulu. Kwaba liqela le-13 le-1 liye lawa kwi-radiyo yelizwe kunye neyokuqala kwiminyaka emithathu.
5. Eyesibini Harmony - "Sledgehammer" (2014)
I-Harmony yesihlanu - "Sledgehammer". Epic efanelekileyo
I-Meghan I-Co-ordinator yabhala "uSledgehammer" kunye nomculi wengoma yaseDenmark uJonas Jeberg noMnumzi waseMerika uSean Douglas owaziwayo ngomsebenzi wakhe kwi-"Heart Attack" kaDemi Lovato kunye noJason Derulo. "Sledgehammer" yakhululwa ngentlawulelo yeMeghan Trainor yimpumelelo yakhe yokuqala ngokuthi "All About That Bass" ingqalelo ekubandakanyekeni kwakhe ngengoma. Njengoko elinye iqela lesithathu lingatshatanga, "uSledgehammer" waqhubeka nomzekelo wokuba ngamnye umntu abe mkhulu kunokugqibela. Kwaba ngowamahlanu wokuqala kwi-Harmony ukuya kutsho kwi-40 ephezulu kwi-Billboard Hot 100 kwaye yafumana isitifiketi seplatinum yokuthengisa.
4. I-Meghan Trainer - "Njengoko Ndiya Kulahleka" equka uJohn Legend (2015)
I-Meghan Trainer - "Njengoko Ndiya Kulahleka" equka uJohn Legend. Epic efanelekileyo
I-Meghan I-Co-ordinator yabhala-"Wabhala Njengaye Ndilahlekile" kwisithuba seminyaka ngaphambi kokurekhoda kwe-albhamu yakhe. Wayefuna ukukhuphela ingoma, kodwa ulawulo lwakhe lwamncedisa ukuba alugcine. Abahlalutyi bamdumisa amagama asemibini kwi-ballade kunye nomculi weR & B owaziwayo uJohn Legend. Benzile ndawonye bahlala kwii-Billboard Music Awards zikaMeyi 2015. Ngabantu ababethebileyo indumiso, ingoma yaqalisa ukunyuka amashadi. Ekugqibeleni waba ngu-Meghan Trainor wesithathu ephezulu kwi-albhamu ethintela kwi-albhamu yakhe yesihloko . "Njengaye Ndiya Kulahleka" waba ngowokuqala u-# 1 hit kwi-radio pop.
3. UMeghan Trainer - "Hayi" (2016)
I-Meghan Trainer - "Hayi". Epic efanelekileyo
Ukulandela impumelelo yakhe ngeentlobo ezi-10 eziphezulu eziphambili kwi-albhamu yakhe yokuqala ye- Title , abaninzi ababukeleyo babezibuza ukuba uya kukwazi ukuyilandela ngeentsimbi ezingaphezulu. Ngokuba "Hayi," owokuqala omnye kwi-albhamu yakhe yesibini Uyabonga , wasuka kwisandi se retro esasiLawula isihloko kwisandi somphefumlo wangomhla. "Hayi" yaba yinto yokutshiza. Ngomxholo we-# 3 weyona nto eyenziwa bhetele kunanoma yiyiphi inqaku lakhe kodwa "Yonke into malunga neBas." Ingoma iyimvumi yabasetyhini abasetyhini abondliwa ngabantu abangayiqondi igama, "Hayi." Iqonga layo elingama-21 kwi- Billboard Radio Songs ishadi livule kakhulu kwiminyaka emihlanu. "Hayi" yaphuka kwi-10 ephezulu kwi-pop kunye ne-radio pop.
2. I-Meghan Trainer - "Imilomo i-Movin" (2014)
I-Meghan Trainer - "Iimilo zi-Movin". Epic efanelekileyo
Ngomxube we-bulblegum pop kunye ne-doo-op, "Iilwimi zi-Movin '," ukubambisana kwengoma phakathi kweMeghan Trainor noKevin Kadish, kukhutshwa njengowesibini kwi-albhamu yakhe yokuqala. Ilandele i-# 1 ibetha "Konke malunga naloo Bass" kwaye ifakwe kwi # 4 kwi-chart yase pop yase-US. Ingoma yadunyiswa ngokubambelela kwisimboli somculo esenza "yonke into malunga neBass" impumelelo enkulu. "Iifomo zi-Movin" "zingene ngaphakathi kwe-5 eziphambili kwi-pop ephakathi, emphakathini omdala kunye nomntu omdala onomathotholo. Kwakhona kwafikelela kwi-10 ephakamileyo yep pop kwezinye iindawo ezininzi emhlabeni jikelele.
1. I-Meghan Trainer - "Yonke into malunga neBass" (2014)
I-Meghan Trainer - "Yonke into malunga neBass". Epic efanelekileyo
"Yonke into malunga neBas" yazisa iMeghan Trainor kwilizwe lomculo we pop. Kwadibanisa udumo oluqilima kwabasetyhini abangafanelanga umxholo wobugcisa obuqhelekileyo, umgca we-bass, kunye nesimboli somculo esikhumbula amaqela amantombazana e-1960. "Yonke into malunga neBass" yayiyi-hit enkulu yamazwe ngamazwe afikelela kwi-# 1 kumazwe amaninzi ahlukeneyo emhlabeni jikelele kuquka ii-US kunye ne-UK. Yayifumana i-Meghan Trainor I-Grammy Ikhetho lokunyulwa kweeNcwadi zoNyaka kunye neNgoma yoMnyaka.
Eyona ndlela ihamba phambili kwiNkosana zeNgoma
Umlando wePrince ka-1984 'Iholide leMvula.'
Amacandelo okuBhala okuTitshala
Kutheni a maKristu angamaKristu?
I-Evolution yee-Eukaryotic Cell
Indlela yokuPhatha umgangatho omncinci wokushisa